May 22, 2021 685
मेष –चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) -काममा अनयासै हस्तक्षेप गर्नेहरू`लाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । अदाल`ती नि`र्णयहरू तपाईंकै पक्षमा आउनेछन् भने विवा`दित विषयहरू आफ्नै पक्षमा फैसला गराउन सकिनेछ । अध्ययनमा प्रगति भई भनेजस्तो नतिजा हात लगाउन सकि`नेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसि`लो हुनुको साथै जीवन साथीको हरेक पाइलामा समर्थन पाइने योग रहेको छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो)- पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले प्रतिस्पर्धी`हरूलार्ई पछि छोड्दै एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । माया प्रेमका कोपिला`हरू फक्रिएर जानेछन् भने नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताव आउनेछ । दैनिक उप`भोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइन`बाट सप्लाई हुने सामान`को व्यापार व्याव`साय फस्टाएर जानेछ । पदिय दायित्व बढ्ने तथा काम गर्ने ठाउँमा तपाईंको काम गर्ने शैलीको धेरैले प्रशंसा गर्नेछन् ।
मिथुन (का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा)- राजनीति तथा समाज`सेवामा जनतासँग सन्तु`लित व्याव`हार गर्नुहोला, आलो`चनाको सिकार हुनुपर्नेछ । औषधि`जन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामान`को उत्पादन तथा व्यापार व्याव`साय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दी आउनेछ । आमाको तथा आमा सरहका मानिसको स्वास्थ्यमा स`मस्या आई उप`चार खर्च बढ्नेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन नजाने हुनाले अरूभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमु`टाव बढ्नेछ, ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो)-न्यायिक निर्णयहरू तपाईंकै पक्षमा आउनेछन् भने प्रतिस्पर्धी`हरूलार्ई परास्त गर्दै अपेक्षित नतिजा हात पार्न सकिनेछ । विद्यामा तपाईंको नाम अग्र स्थानमा आउने तथा अन्य क्रिया`कलापमा पनि सहभागी भई प्रतिस्पर्धी`हरूलार्ई हराउन सकिनेछ । माया`प्रेममा नजिकिने समय रहेको छ भने पतिपत्नी`बीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
सिंह (मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टु, टे)-मायाप्रेममा सामीप्यता बढ्नेछ भने पतिपत्नीबीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । परिवार`सँगको बसाइमा स्वादिष्ट भोजनका साथ समय व्यातित गर्न सकिनेछ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत अध्ययन`लाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । दैनिक उप`भोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामान`को व्यापार व्याव|साय फस्टा`एर जानेछ ।
कन्या (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)-लामो सङ्घर्ष पछि मात्र उपलब्धि हात लाग्ने समय रहे`काले काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय दिए मात्र आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने नयाँ काम थालनी गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिनुहोला ।
पढाइ लेखाइमा सफलता प्राप्त गर्न निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । मायाप्रेममा नजिक भए पनि आत्मीयताको कमी महसुस हुनेछ । आफन्त तथा अग्रजहरूसँग मनमु`टाव बढ्ने तथा साथीभाइले असहयोग गर्दा मनमा बेचैन पैदा हुनेछ ।
तुला (रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तु, ते)-आत्मीय मित्र तथा सह`योगीको सहयोग नपाउँदा थालेका कामहरू बीचमा छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । व्यापार व्याव`सायमा समय दिन सकिने छैन भने सोचेजस्तो आम्दानी नहुँदा दैनिक खर्च जुटाउन मुस्किल पर्नेछ ।
समय प्रतिकूल बन्नेछ भने यही बेलामा आय आम्दानीका बाटाहरू साँघुरा हुनेछन् । तर पनि विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूले मनग्य धन आर्जन गर्न सक्नेछन् । प्रेम प्रसङ्गमा चिसो`पनले जरा गाड्नेछ, ख्याल गर्नुहोला ।
बृश्चिक (तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू) -आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट भनेजस्तो सहयोग नपाइने हुँदा मन खिन्न हुनेछ । माया`प्रेममा मनमुटाव बढेर जानेछ भने परिवार तथा सन्तान`सँग राय बाजिनेछ । बाहिरी वातावरण तथा मौसम`को ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । तर पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइन`बाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे)-गीतसङ्गीतमा विशेष रुचि बढ्नेछ भने विद्यामा तपाईं अब्बल साबित हुनुहुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् । पारिवारिक जमघ`टमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनुको साथै मायाप्रेमको गाँठो कसिलो भएर जानेछ ।
मकर (भो, जा, जी, जु, जे, जो, ख, खी, खु, खे, खो, गा, गी)-सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ । मायाप्रेमको गाँठो कसिलो भएर जाने तथा जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम सम्पादन हुनेछन् । प्रतिष्ठित काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा)-समस्याका खाडलहरू पुर्न अथक प्रयास गर्दागर्दै विफल हुनुपर्दा तनाव बढ्नेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ भने दैनिकी प्रभावित हुनेछ । विशेष गरी चेली माइतीसँग कुनै कारोबार गर्दा ख्याल गर्नुहोला, मनमुटावको स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । पढाइलेखाइमा समय दिन नसक्दा गृहकार्यहरू थाँती रहनेछन् । मायाप्रेममा धोका हुनेछ भने पतिपत्नीबीच मनमुटाव सिर्जना हुने योग रहेको छ ।
मीन (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची)- पढाइलेखाइमा मन जाने हुनाले उत्कृष्ट नतिजाका साथ पुरस्कार जित्न सकिने हुँदा आफन्त तथा गुरुजनहरू खुसी हुनेछन् । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुनुको साथै जीवनसाथीको साथ रहने हुनाले काम गर्न ऊर्जा थपिनेछ । भौतिक तथा विलाशी वस्तुहरू प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
Prevमाधव नेपालको साथ छाडेर केपि ओलीतिर लागे योगेश भट्टराई, लेखे यस्तो स्टाटस
Nextआज अमेरिकी डलरको भाउ कति पुग्यो ? अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ
साउदीमा रहेका नेपालीका लागि दूतावासले निकाल्यो यस्तो सूचना, के छ सूचनामा ? हेर्नु-होस्
सबैलाई रुवाउने प्रमोद खरेलको ‘छाती चिरेर’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)